Indlela Yokuvula Nokusebenzisa i-Apple Music ku-iPad
Indlela yokusebenzisa i-Apple Music ku-iPad
by Izizwe zikaDaniel
Indlela Yokuvula i-Apple Umculo ku-iPad
Ukuze ujoyine i-Apple Music, uzodinga kuqala ukuvuselela i-iPad yakho ku-iOS 8.0.4. Ungakwenza lokhu kuzilungiselelo ze - iPad ngokuya kuzilungiselelo ezijwayelekile bese ukhetha i-Software Update. ( Thola imiyalelo eningiliziwe ekuthuthukiseni i-iPad yakho . ) Ngemva kokuvuselela , uzocelwa ukuthi ujoyine i-Apple Music okokuqala uma uqala uhlelo lokusebenza lomculo.
Kwabaningi bethu, lokho kuzoba yi-no-brainer. I-Apple inikeza isivivinyo samahhala sezinyanga ezintathu, futhi kulula ukuthi "Yebo!" ukukhulula umculo. Kwabanye, kuyisinqumo esinzima kakhulu. Umsebenzi wokuhlola wamahhala kakhulu ngoba ngisho noma singayisebenzisi isevisi, sivame ukukhohlwa ukuyikhansela kuze kube yilapho sikhokhiswa ngempela.
Ithiphu: Cela uSiri Ukukhumbuza Ukukhansela i-Apple Music
Futhi uma usuqedile lelo khasi lokuqala lokubhalisa, ngeke uphinde uvuselelwe. Ngakho ubhalisela i-Apple Music?
Ekhoneni elingenhla elingakwesokunxele sohlelo lokusebenza lomculo oluhlelwe kabusha lwe-Apple yinkinobho efanelwe njengekhanda elincane elinombuthano elizungezile. Thepha le nkinobho ukuze uthole ulwazi lwe-Akhawunti yakho.
Izilungiselelo ze-akhawunti zizokuvumela ukuthi ushintshe igama elihambisana ne-akhawunti yakho ye-Apple Music, isiteketiso esibonisa lapho uthumela imilayezo nesithombe sakho sephrofayela. Ungaphinda uvule i-Apple Music ngokuthepha inkinobho ethi "Joyina Apple Music".
Okulandelayo: Khetha i-Apple Music Plan Yakho
Khetha uhlelo lwakho lomculo lwe-Apple
Ngemuva kokuthi uthayiphe inkinobho ethi "Joyina Apple Music", uzobe uhlelwa ukuthi uluphi uhlelo lokubhaliselwa ofuna ukuyisebenzisa. Uhlelo olulodwa lungenxa ye-akhawunti yakho, kanti uhlelo lomndeni lungasetshenziswa yinoma ubani emndenini wakho.
Le yingxenye ebalulekile: Ukuze usebenzise uhlelo lomndeni, udinga ukuxhumanisa ama-akhawunti wonke we-iTunes ku- Shared Family Sharing . Uma wonke umuntu emndenini wakho ehlanganyela i-akhawunti efanayo ye-iTunes, uhlelo lweMndeni ngeke lungeze lutho kuhlelo lomuntu ngamunye.
Ungacelwa ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-iTunes ukuqinisekisa ukuthenga kwakho. Uma lesi yisikhathi sokuqala sokubhalisa, ngeke usuke ukhokhiswa kuze kube yilapho isivivinyo samahhala siphelile, kodwa usazodinga ukuqinisekisa ukuthi ukhetha ngokufaka iphasiwedi yakho.
Okulandelayo: Khetha Umculo Wakho Othandayo
Khetha Umculo Wakho Othandekayo Nabaculi
Ngemuva kokuthi ukhethe uhlelo lwakho lwe-Apple Music, yisikhathi sokutshela i-Apple kancane mayelana nezithakazelo zakho. Uzokwenza lokhu ngokukhetha izinhlobo zakho zomculo ozithandayo kusukela emibuthanweni encane ebomvu kusikrini. Khumbula, kufanele uthathe kabili umculo wakho oyintandokazi kanye kanye nomculo owuthandayo kodwa ungathandi.
Indlela Yokulalela ama-podcast ku-iPad yakho
Isinyathelo esilandelayo ukukwenza okufanayo nabaculi. Abaculi abavela esibukweni bazokwenziwa kusuka ezinhlotsheni ozikhethile njengezintandokazi zakho, kodwa futhi uzoba nenketho yokwengeza abaculi abasha kuphela uma ungaqapheli amagama amaningi.
Uma lezi zinyathelo zibonakala zijwayele, zifana nokubhalisela iTunes Radio. Kubi kakhulu ukuthi i-Apple ayizange ithwale lezo zimpendulo ku-Apple Music.
Okulandelayo: Ukusebenzisa i-Apple Music
Ukusebenzisa i-Apple Music
Manje njengoba usuqedile inqubo yokubhalisa, ungaqala ukusebenzisa i-Apple Music. Uhlelo lokubhalisa lunikeza ukufinyelela ezinkulungwaneni zezingoma ongazisakaza. Ngakho ukuqala kuphi?
Sebenzisa inkinobho yokusesha phezulu ngakwesokudla kwesikrini ukuze ufune ibhendi noma ingoma oyithandayo kodwa engenayo. Nakuba abaculi abaningi behlanganyela ku-Apple Music, abanye abakwenzi, ngakho-ke uma ungakwazi ukuthola ingoma noma ibhendi, zama okuhlukile.
Uma uthola ingoma, ungayidlala ngokuthinta isithonjana esiseduze nayo. Kodwa ungenza okuningi kunokudlala nje. Uma uthepha izinkinobho ezintathu ngakwesokudla kwegama lezingoma, uzothola imenyu evumela ukuthi ungeze ingoma emgqeni wakho wamanje, uyifake ohlwini lokudlala, ulanda ukuze ukwazi ukudlala ngenkathi ungaxhunyiwe ku-intanethi noma uqale isiteshi somsakazo esikoqobo esekelwe ingoma.
I-Top Apps For Movies Yombukiso Nemiboniso Ye-TV
Faka i-Photo Filter ku-App Photos
Indlela Yokuthola Inamba Yakho Ye-iPad
Indlela Yokusebenzisa i-iPad yakho ku-iPhone yakho
Ungadala kanjani i-ICloud Photo Stream Album ye-iPad
Indlela Yokusetha Futhi Sebenzisa Apple Ipensela ku-iPad yakho
Indlela yokuvumelanisa i-iPad ne-iTunes
Indlela yokuguqula i-My My iPad noma Vala
Indlela Yokuvimbela Omunye Ekuphumeni Kwesicelo se-iPad Usebenzisa Ukufinyelela Okuqondiswayo
I-Active Active Changer Professional v9.0
Ukuvumelanisa Oxhumene nabo Be-BlackBerry Ne-Application Desktop
Kungani Ungagqokisa Ikhompyutha Yakho?
Ungayithola kanjani i-Netflix ku-Xbox
Zonke Izinto Ongayilandela Ngezintambo
Ukuqhathaniswa kweziphequluli zewebhu ze-Macintosh (OS X)
Indlela yokusebenzisa Ithuluzi 'Ngram Viewer' ku-Google Amabhuku
AmaReceivers asekhaya yasekhaya kanye nesici se-Multi-Zone
Iyini isidlali se-3D Blu-ray Disc?
Amathiphu Wokuqasha Umthuthukisi wohlelo lokusebenza lweselula
Ukuthuthukiswa ku-OS X 10.5 I-Leopard
I-Cardio Trainer Pro
Indlela Yokusetha kabusha iphasiwedi yeWindows Vista
Indlela Yokulungisa Mac yakho ngokusebenzisa i-MacOS Public Beta
Izindlela ezingu-5 zokukhahlela okuqukethwe kubhulogi yakho
Ukuphulukisa i-Car Audio Static
Amaprosesa angu-9 angcono kakhulu we-4K no-1080P okuthenga ku-2018
Ukusebenzisa amaqembu e-Facebook
I-Sub7 / Backdoor-G RAT
Indlela yokuthola i-Windows Vista Product Key Code
Indlela Yokulondoloza Isitoreji Sendawo ku-iPad yakho
Indlela Yokuxhuma Ikhibhodi Ye-Bluetooth ku-Apple TV